बाम गठबन्धनमा जान मेरा आँखा फुटेका छैनन् , यदि कांग्रेसमा उच्च पद पाए सोचौला: बाबुराम  Hamrosandesh.com
नयाँ शक्ति पार्टीले आफ्नो चौथो संघीय परिषद्‌को विस्तारित बैठक लुम्बिनीमा सम्पन्न गरेको छ। लुम्बिनी-संकल्प २०७४ जारी गर्दै नयाँ शक्ति पार्टीले नेपालमा नयाँ राजनीतिक विकल्प दिने प्रण लिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल पनि बन्न नसकेको नयाँ शक्ति आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ला? चुनावअघि वाम गठबन्धनमा जोडिएर लगत्तै अलग्गिएको नयाँ शक्तिले वाम एकतालाई कसरी लिएको छ? यिनै सेरोफेरोमा नयाँ शक्तिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई लुम्बिनी पुगेका बेला गरेको अन्तर्वार्ता :
दुई पार्टी एक भएर देश र जनताको हितमा काम गर्न सके त राम्रो हो नि। उनीहरुले केही गर्न सक्लान् जस्तो देखिँदैन। जनताले स्थायी र विकासप्रेमी सरकारको परिकल्पना गर्दै ती दुई पार्टीलाई बहुमत दिए पनि उनीहरुका आसेपासे, भ्रष्टाचारीसँग उनीहरुको सामीप्यता र राज्यसत्ताको आडमा बसेर सीमित व्यक्तिले लाभ लिने परिपाटीको अन्त्य नहुँदासम्म देखावटी एकताले खास अर्थ राख्दैन। उनीहरुको संरचनात्मक चरित्र सहजै बदलिँदैन। त्यसकारण जनताले सोचे र चाहे जस्तो नेपालको परिकल्पनालाई पूर्णता दिन सक्दैनन्। संरचनात्मक चरित्र भत्काउन सक्ने अवस्था उहाँहरुमा छैन। उहाँहरु जालोमा हुनुहुन्छ। त्यो छाड्न पनि सक्नुहुन्न।
अहिले सरकार बनाउने बेला उहाँहरु कोसँग उठबस गरिरहनुभएको छ?
यो त छर्लंग छ।
हो, म उहाँहरुसँग उभिएको थिएँ। त्यो चुनावी तालमेल न हो। लोकतन्त्रिक शक्ति हुँ भन्ने दलहरु नै नेपालमा नयाँ पर्टी जन्मिन नदिने षड्यन्त्रमा लागे। चुनाव लड्ने दललाई चुनाव चिह्न नदिने। संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुदै पनि नयाँ दल खोल्न नमिल्ने। र, उनीहरुको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खालका कानुन बनाएकाले वाध्य भएर तालमेलको पक्षमा उभिनुपरेको हो।
स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लडेर कसले जित्छ?
कांग्रेसले स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लडेर देखाओस् त। यी कम्युनिस्ट भन्नेहरुले स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लडेर देखाउन सकुन् त। उनीहरुको अवस्था कहाँनेर रहेछ भन्ने थाहा हुने थियो।